Amashishini asemngciphekweni wokuGunyazwa ngokuThenga | Martech Zone
NgoMvulo, nge-6 kaJanuwari, 2014 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Kutshanje, bendikwingxoxo kwiqela lobunkokeli kwimidiya yoluntu kuFacebook kwaye bendimangalisiwe xa elinye lamalungu likhusela ukuthenga abalandeli. Kwiminyaka embalwa edlulileyo ndibhale iposti yokuba INumeri Matter. Kweso sithuba, andikhange ndiphikise ukuthenga abalandeli, ukuthandwa, ukucofa, njl njl.
Nditshintsha ingqondo. Ayikuko ukuba andikholwa ukuba la manani abalulekile. Ndikholelwa ukuba iinkampani zibeka igama lazo kunye negunya emngciphekweni ngokusebenzisa ezi ndlela. Kwaye itoni yeenkampani. Igunya lokuthenga libe lishishini elikhulu. Ukuba injongo yakho njengophawu kukwakha igunya ngokubonisa amanani amakhulu… usengozini yokuphulukana nelo gunya kunye nako nakuphi na ukuthembeka ngokwenza njalo.
Oku kundikhumbuza i enjini yokukhangela noun ishishini. UGoogle ubhengeze ixesha elithile kuyo Imiqathango yeNkonzo Ukuthenga ukubekwa kwamakhonkco kwakukwaphula ngqo. Izibonelelo; nangona kunjalo, zigqithile iindleko kwaye abantu abaninzi baxhamla ngokuthenga amakhonkco… de kwawa isando. Ngoku ezinye zeenkampani ezityalile amashumi amawaka eedola zilahlekelwe zizigidi.
Ndiqikelela ukuba oku kuyakwenzeka nakumajelo asekuhlaleni. Imigaqo yeNkonzo yazo zonke iindawo ezinkulu zosasazo lwasekuhlaleni sele zilumkisile ukuba kusetyenziswa ulwazi olungelolwakho ukuqhuba amanani:
Twitter -Ungadibana neewebhusayithi okanye usetyenziso olubanga ukuba lunokukunceda ufumane abalandeli abaninzi ngokukhawuleza. Ezi nkqubo zinokucela intlawulo kubalandeli, okanye zikucele ukuba ulandele uluhlu lwabanye abasebenzisi ukuze uthathe inxaxheba. Ukusebenzisa ezi akuvumelekanga ngokwefayile ye- Imigaqo ye-Twitter.
Facebook - Ndingazithenga izinto ezithandwayo kwiphepha lam likaFacebook? Hayi. Ukuba iinkqubo zogaxekile zikaFacebook zibona ukuba iphepha lakho lixhunyiwe kolu hlobo lomsebenzi, siza kubeka imida kwiPhepha lakho ukunqanda ukwaphulwa okungaphaya kweNgxelo yamaLungelo noXanduva.
LinkedIn -Ngokwahlukileyo kwezinye iinkonzo ezikwi-Intanethi, amalungu ethu kufuneka abe ngabantu bokwenyani, abanikezela ngamagama abo okwenyani kunye nolwazi oluchanekileyo malunga nabo. Akulunganga ukubonelela ngolwazi olulahlekisayo malunga nawe, amabanga akho emfundo okanye amava akho omsebenzi, imibutho okanye impumelelo kwinkonzo ye-LinkedIn. Isivumelwano somsebenzisi.
Google -Abavakalisi abanakho ukuqondisa abasebenzisi ukuba bacofe iqhosha kuGoogle + ngeenjongo zabalahlekisi babasebenzisi. Abapapashi abanakho ukukhuthaza amabhaso, iimali, okanye izinto ezilingana nemali endaweni yokuchofoza kuGoogle +. Umgaqo-nkqubo wamaqhosha.
Youtube -Ungabakhuthazi abanye ukuba bacofe iintengiso zakho okanye basebenzise iindlela ezikhohlisayo zokuphumeza ukufumana ii-clicks, kubandakanya ukucofa iividiyo zakho ukufaka umbono. Oku kubandakanya ukugunyazisa iiarhente zomntu wesithathu ezibhengeza ezi nkonzo ukwandisa ukubonwa kwakho. Ukuthengwa okanye ukudlalwa kwababhalisi, ukujonga okanye nayiphi na enye into enejelo kukwaphula umthetho wethu Imiqathango yeNkonzo.
Ke… xa iqumrhu okanye ilungu lelo qumrhu lisebenzisa la maqonga, bayavuma kwisivumelwano esisibophelelayo ngokusemthethweni nenkampani nganye kwezi. Xa wophula imigaqo yabo, wophula isivumelwano. Ngelixa ndingakholelwa ukuba nasiphi na isigebenga singalandela umonakalo ngokwaphula imigaqo yabo, bayaphula umthetho. UVevo, umzekelo, baphulukene nazo zonke izimvo zabo kunye negunya labo kuYouTube xa uGoogle eqonda ukuba bathenga iimbono ukugcina amanani abo enyukile.
Ngelixa iinkampani ezinokuthi ziwathobele la magama, kuya kuba ngumdla ukubona indlela oorhulumente abayijonga ngayo. Nditsho neqela lika Mongameli u-Obama liye labanjwa ... ngaphezulu kwesiqingatha sabantu abalandelayo bayinyani. Ewe, akukho mathandabuzo kwigunya lika-Mongameli u-Obama… ke andiqinisekanga ukuba kutheni izigidi ezili-10 okanye i-100 lezigidi zabalandeli zinemicimbi engaphandle kwe-ego. ISebe likaRhulumente nalo libanjiwe- inkcitho ngaphezulu kwe- $ 630,000 kwi-Facebook Likes. (Ungayichazanga eyokuba andiqinisekanga ukuba abemi bafuna ukuba imali yabo yomhlawuli werhafu isetyenziswe ngale ndlela).
Kukho icala elimnyama kula manani, nangona kunjalo, kwaye kunjalo imimiselo yorhwebo. Phantse lonke ilizwe linegunya elilawulayo eligwetyelwe ukujonga abathengi. Kuthekani ukuba umthengi ujonge inkampani kwi-Intanethi, abone amanani aphezulu abalandeli, abalandeli, ukuthanda okanye ukuphinda enze impendulo, kwaye enze isigqibo sokuthenga ngokusekwe kubalo olungeyonyani? Okanye okubi nangakumbi, kuthekani ukuba umtyali mali uphonononga inkampani abanqwenela ukuyityala kuyo kwaye banikwe umbono wobuxoki wokuba baziwa kakhulu kunokuba kunjalo? Injongo yoku kuthengwa is ukuphembelela abathengi… kwaye ndiyakholelwa ukuba oko kuyenzeka.
Ukuba igama elinye okanye amabini anokusetyenziswa yi-FTC ukohlwaya inkampani ngentengiso engeyonyani okanye intengiso, ukuthengwa kwabalandeli, abalandeli, ukuphinda-phinda, + 1s, ukuthandwa okanye ukujonga kuya kujongwa njani nemibutho enganyanisekanga? Ngaba inkampani iya kuba noxanduva kuba basebenzise ezo zibalo?
Ndiyakholelwa kwikamva ukuba baya kuba njalo. Qinisekisa ukuba abasebenzi bakho abazisebenzisi ezi ndlela. Ndiya kuqinisekisa ukuba nayiphi na iarhente okanye umntu wesithathu owenza ishishini akazisebenzisi ezi ndlela.
tags: ukuthenga + 1sukuthenga kulandelaukuthenga ukuthandaFacebookGoogle +LinkedInTwitter
Isikhokelo seNgcaciso yokuHamba kwiMithombo yeendaba yeNtlalo